Kooxaha Chelsea, Liverpool oo guulo raaxo leh gaaray, Man United oo si dirqi ah ku soo baxday & guud ahaan kulamadii laga ciyaaray Carabao Cup…+SAWIRRO – Gool FM
(England) 25 Sebt 2019. Waxaa caawa la ciyaaray kulamo ka tirsan tartanka Carabao Cup, iyadoo kooxaha ciyaaray ay qeyb ka ahaayeen kuwa ugu waaweyn kubadda cagta England sida Chelsea, Liverpool iyo Manchester United.
Kooxaha Chelsea iyoLiverpool guul wada gaaray kulamadii ay ka ciyaareen caawa tartanka Carabao Cup-ka, halka Manchester United taako loo dhigay, balse ay ku soo baxday rigoorayaal
Kooxda uu hogaamiyo tababare Frank Lampard ee Chelsea ayaa ku garaacday naadiga Grimsby Town 7-1, waxayna Blues goolasha kaga mahad celineysaa xiddigaheeda kala ah Ross Barkley, Michy Batshuayi 2 gool ah, Kurt Zouma, Reece James, Callum Hudson-Odoi iyo Pedro Rodriguez.
Sidoo kale wiilasha ninka reer Germany ee Jürgen Klopp waxay kaga adkaadeen kooxda Milton Keynes Dons 0-2, waxaana goolasha u dhaliyay .xiddigaha James Milner iyo Ki-Jana Hoever.
Manchester United ayaa dhankeeda la dhaafi weysay kooxda yar ee Rochdale barbaro 1-1 ah, Red Devil waxa goolka u dhaliyay xiddigooda Mason Greenwood, laakiin ugu dambeyntii United-ka ayaa ugu soo baxday wareega xiga ee tartankan rigoorayaal 5-3.
Sidoo kale kooxaha Wolverhampton Wanderers iyo Reading oo kulankooda ku soo idlaaday barbaro 1-1 ah ayaa ugu dambeyntii rigoorayaan 4-2 ah waxaa ku soo baxday kooxda Wolverhampton
Hadaba ka bogo dhamaan natiijooyinka kulamadii caawa laga ciyaaray tartanka Carabao Cup.
Wolverhampton Wanderers 1 – 1 Reading – (Rigoorayaal 4-2)
Manchester United 1 – 1 Rochdale – (Rigoorayaal 5-3)